March 12, 2017 - Written by Puntland Fox
Nawa waxa ay tacliinla’aan ku gaadhay 16 jir. Markaas oo ay qaxooti ku ahayd dalka Malaysia, ayay markii u horreysay fadhiisatay fasalka dhexdiisa. Carruurta ay wax la dhiganaysay aayay da’doodu ahayd 10 jir iyo wax ka yar. Qosolka kaga imanaya dhallaankaasi, ma uu ahayn mid joojinayey rabitaankeeda. Afka keli ah ee ay taqaanno ayaa ahaa Soomaali, kaasina wax badan u ma uu qabanayn.
Malaysia oo ah dal aan u oggolayn in dadka qaxootiga ahi ay tacliinta guud dhigtaan, ayay ka h
eshay dugsi la yidhaa Fugee School oo dadka soogalootiga ah ka caawiya tacliinta. Markii u horreysay ee nolosheeda ayay qalin qabsatay, isla markaas qayrkeed ayaa ka qalin jebinayey dugsiga sare.
16 sanno ayaan ku soo gaadhay tacliinla’aan. Maalintii u horreysay ee aan shandadda dhabarka ku qaatay, muraayadda ayaan isku eegayey oo waan la yaabbanaa in aan ardayad ahay.
Dhowrkii bilood ee u horreeyey, waa ay ku dhacday xiisad kasta oo ay gashay. Muddo kooban ka dib ayay se soo gaadhay ardaydii oo ay keentay derajadii loo baahnaa. Nawa maanta waa 20 jir, wax badanna way baratay.
Waa layaab in aan wax badan ku bartay muddo 4 sanno ah. Laakiin shidaalka aan ku socdo ayaa ah in aan ahay qofka keli ah ee wax bartay reerkayaga, heerkanna soo gaadhay. Waxa aan rabaa in aan tusaale u noqdo hablo badan oo ka cabsanaya in ay rumeeyaan riyadooda.
Nawa waxa ay rabtaa in ay hablo badan keento dugsiga Fugee School, maaddaama, ayay tidhi, ay habluhu kaga firfircoon yihiin wiilasha dhanka waxbarashada. Waxa ay sheegtay in dhaqannada bulshooyinka qaarkood ay dhiirri geliyaan tacliinta wiilasha oo keli ah, wiilashuna aanay culays iska saarin waxa ay baranayaan. Waxa kale oo ay sheegtay in inta badan hablaha lagu guursan jirey da’ yar, sida 12 ama 14 jir. Bal se maanta ay arrintaasi is beddelayso oo aad arkayso hablo da’doodu tahay dhowr iyo labaatan oo aan weli la guursan, waxna baranaya.
Sannadkii hore ayay dhammaysay dugsiga sare, waxa aanay bilowday jaamacadda. Waxa ay ka mid tahay 42 arday oo ay kala qaateen saddex jaamacadood oo Malaysia ku yaallaa. Nawa waxa ay sheegtay in uu farqi u dhexeeyo iyada iyo asxaabteeda dalka u dhashay, marka ay wax baranayaan.
Qofka qaxootiga ahi waxa uu soo maray duruufo kala duwan oo dagaal iyo rafaad ah. Taasi waxa ay keenaysaa in aannu dedaal saa’id ah la nimaadno marka aannu wax baranayno.
Nawa waxa ay haatan si tabarruc ah ugu shaqaysaa dugsigii iyada caawiyey, halkaas oo ay wax u dhigto carruurta kale ee qaxootiga ah. Toddobaadkii saddex maalmood ayay wax u dhigtaa carruurta, waxa aanay rabtaa in ay heer ka gaadhaan waxbarashadooda.
Nawa waxa u qorshaysan oo ay rabtaa in ay barato Xidhiidhka Caalamiga ah si ay ugu shaqayso oo ay horu mariso xuquuqda aadamaha. Waxa kale oo ay rabtaa in ay aasaasto urur u gaar ah oo ay ka shaqayso arrimaha qaxootiga.
Qof kasta oo Aadame ahi waxa uu xaq u leeyahay waxbarasho. Waxbarashadu waa furaha albaabbo badan. Markii aan imid Malaysia, intii aanan wax dhigan, ma aan garanayn halka ay noloshaydu ku dambayn doonto iyo sida uu mustaqbalkaygu noqon doono. Laakiin imika waan garan karaa sida ay noloshu u ekaan karto, fursadaha kala duwan ee aan heli karo iyo in aan haysto xirfadihii aan dunidan ugu adeegi lahaa.